Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Vehivavy novonoin'ireo olona nitam-piadiana nisaron-tava teny amin'ny morontsirak'i Soeda
Andian-jiolahy nirongo basim-borona nisaron-tava no nanafika lehilahy sy vehivavy nitondra zaza teny akaikin'ny morontsiraka malaza Ribersborg, Soeda. Nitifitra teo anelanelan'ny valo ka hatramin'ny folo ireo mpanafika, voalaza fa avy amina fitaovam-piadiana marobe, nandratra vehivavy iray, talohan'ny nandosiran'izy ireo ny toerana nisy ny trano fonenana iray teo akaiky teo.
Voalaza fa nitondra ity zaza ity ilay vehivavy rehefa voan'ny bala tamin'ny fanafihana tsy nisy tohiny. Nentina tany amin'ny hopitaly izy mba hotsaboina fa maty noho ny ratra nahazo azy. Taitra ilay lehilahy niaraka tamin'izy ireo.
Mihaza ireo olon-dratsy ny polisy soedoà.
Espaniôla sy Italie dia nantsoina hoe toeran-kaleha fitsangantsanganana an-tsambo ho an'ny mpamaky UK
CTO: Hitohy ny Konferansa fizahan-tany maharitra any Karaiba, niova ny fandaharam-potoana noho ny Tropical Storm Dorian